Zavamaniry - Pejy fandokoana maimaimpoana ho an'ny ankizy
Fikarakarana zaridaina amin'ny Novambra sy Desambra | zaridaina
Asa fanaovana zaridaina izay mitranga amin'ny Novambra sy Desambra? Izay mieritreritra fa afaka miala sasatra ny mpikarakara zaridaina amin'ny Novambra sy Desambra dia diso.
Zaridaina amin'ny Novambra
Indrindra amin'ny volana Novambra dia mbola betsaka ny zavatra tsy maintsy atao alohan'ny filatsahan'ny ririnina. Azavainay etsy ambany hoe inona ny asa mahazatra, ny fikojakojana ary ny fiarovana ny ririnina mbola miandry.
Ny zaridaina amin'ny Novambra sy Desambra
Ny volana novambra no fotoana tsara indrindra hambolena hazo voaroy sy voankazo. Raha mbola mamela azy ny toetrandro ary mijanona tsy misy fanala dia afaka mamboly hazo hafa koa ianao. Ny zavamaniry sy ny perennial sensitive toy ny lavender dia tokony hosaronan'ny ravina na bozaka na miaraka amin'ny jute sy ny volon'ondry farafaharatsiny.
Mitandrema rehefa manety, indrindra amin'ny ahitra haingo. Misy dikany kokoa ny famatorana ny ahitra maina hiarovana ny faka amin'ny hatsiaka sy lena. Ny kirihitra sy ny konifera koa dia tokony hamatotra kely araka izay tratra. Amin'izany fomba izany, ny lanezy be dia be dia tsy afaka manimba ireo zavamaniry.
Soso-kevitra: Sarin-javamaniry maimaim-poana mandritra ny taona
“Ny zaridaina amin'ny Novambra sy Desambra | Garden " Manohiza mamaky
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 25. Oktobra 2020 30. Oktobra 2020 Sokajy tokantranoKeywords zaridaina, zaridaina, Fikolokoloana zaridaina, fototraLeave a Comment ho an'ny zaridaina amin'ny Novambra sy Desambra | zaridaina